Saikinosy Hindustan | Vaovao momba ny dia
Mariela Carril | | India, Fitsangatsanganana any Azia
Izay manana ny fanahin'ny mpitsangatsangana dia nijery sarintanin'izao tontolo izao ary mihoatra ny indray mandeha dia nibanjina ny zanatany indianina. A toerana tsara ho an'ny fizahan-tany mampientanentana sy ara-toekarena.
Ity faritra ity izao tontolo izao dia fantatra ara-tantara hoe ny saikinosy Hindustan ahoana raha, tany misy hatsarana, kolontsaina ary tantara maro izy. Betsaka ny milaza fa ny vanim-potoana iray eto sy ny fiainanao dia hiova mandrakizay, ka andao hojerentsika izay fahagagana miandry antsika.
2 Olana momba ny jeografia
3 Ny toekarena ao amin'ny saikinosy Hindustan
4 Ireo firenena ao amin'ny saikinosy Hindustan
Araka ny efa nolazainay tetsy ambony, ny saikinosy dia tsy inona fa ny zanaky ny indianina, tany misy geopolitika misy firenena fito: India, Sri Lanka, Bhutan, Nepal, Bangladesh, Maldives, ary Pakistan.
Androany ny teny Hindustan dia tsy dia ampiasaina loatra fa misy mpianatra ny Tantara mahalala fa ny antso dia novolavolaina teto sivilizasiona indostanika, tena tsy mitovy amin'ny kolontsaina sisa any Azia. Raha ny tena izy, tena antitra be ilay anarana ary efa nampiasain'ny Persiana.
Ny faritany manontolo dia misy saika efatra kilometatra toradroa kilometatra toradroa. Mandra-pahatongan'ny fanapotehana ny saikinosy tamin'ny taona 40, ny ankamaroan'ny faritra dia fantatra tany Eropa fotsiny hoe India India.
Raha vantany vao nanomboka nisintaka ny herin'ny fanjanahan-tany dia nanomboka nihombo ho any amin'ny fanjakana kely kokoa ny ampahany manan-danja amin'ny faritany. Androany ny teny zana-tany toa mahazatra antsika izany, na dia tokony ho fantatsika aza izany io ihany no zoro eto amin'izao tontolo izao izay teny ampiasaina.
Olana momba ny jeografia
Tahaka ny ahoana ity tany peninsular ity? Manao ahoana ny tontolony, manao ahoana ny toetrany? Ndeha ho tadidintsika fa ny iray sy ny iray dia mamolavola sivilizasiona foana.
Any avaratra no misy ny Himalaya ary ny Ranomasina Arabia, atsimo ny Bay of bengal toerana nandehanan'ny ranomasina an'i Emilio Salgari's Sandokan. Tendrombohitra iray hafa ny HinduKush, miaraka amin'i Afghanistan amin'ny lafiny iray ary Pakistan amin'ny lafiny iray. Ary misy koa ny ambany indrindra Tendrombohitra Suleiman.
Rehefa fantatrao fa India dia iray amin'ireo firenena be mponina indrindra eto an-tany, dia alao sary an-tsaina hoe ny hakitroky ny mponina eto dia tokony ho lehibe tokoa ary. Fantatra izany olona 350 eo ho eo no miaina isaky ny kilometatra toradroa ny velarany, avo fito heny noho ny eo anton'izao tontolo izao.
Ny toekarena ao amin'ny saikinosy Hindustan
Firenena toa India, Bangladesh ary Pakistan no mandray ny ankamaroan'ny hetsika ara-toekarena, fa amin'ny ankapobeny dia ny sehatra voalohany no manome asa maro. Miresaka momba ny fambolena (fivelomana matetika), ny fiompiana omby ary ny fitrandrahana ala.
Ny dite, landihazo, varimbazaha, varimbazaha, millet, sorghum, soja, kafe, ary fary no vokatra lehibe indrindra eto amin'ny faritra. Ary ny indostria? Eny, mivoatra amin'ny alàlan'ny hery lehibe kokoa any India sy Pakistan izy io, na dia izany aza misy orinasa maro any Bangladesh natokana ho an'ny indostrian'ny lamba sy kiraro, ohatra.
Any India, ny indostrian'ny haitao dia nivelatra be Nandritra ny fotoana vitsivitsy, ny rindrambaiko, raha mbola ao Pakistan, farafaharatsiny mandra-pahatongan'ny ady, ny zava-bita dia ny indostrian'ny fanafody sy solika.
Manintona ny ankamaroan'ny fizahantany i India satria tsy mahasarika mpitsidika ny toe-draharaha politika misy amin'ireo mpifanila vodirindrina aminy. Mahamenatra satria ny fomban-drazany, hafahafa amin'ny tontolo andrefana, ny tavela amin'ny arkeolojian'ny sivilizasiona taloha miampy ny hatsarana sy ny fahasamihafana eo amin'ny velaran-taniny dia tokony hampiasain'ny tsirairay.
Ireo firenena ao amin'ny saikinosy Hindustan
India no firenena lehibe indrindra ary miaraka amin'ny isan'ny mponina eto. Any atsimo no misy azy ary manana velarana 3287.590 kilometatra toradroa. Mirefy fito arivo kilaometatra ny halavany ary manana mihoatra ny efatra arivo sisintany.
India dia mifanila amin'i Myanmar, Sina, Bhutan, Nepal, Bangladesh, Pakistan, ny Ranomasimbe Indianina ary ny Ranomasina Arabo. Ny renivohiny dia New Delhi ary mila visa ianao vao afaka miditra. Ho fanampin'izay, misy ny vaksiny: Hepatite A sy B, tazo typhoid, Tetanus-diphtheria ary angamba hafa.
Aleo mitandrina satria tsy voatery ny vaksinina, resaka fahasalamana manokana izany.
Sri Lanka dia repoblika sosialista tsy miankina izay misy sisintany an-dranomasina amin'i India sy Maldives. Ny tantaran'ny olombelona dia 125 XNUMX taona farafaharatsiny. Nandritra ny governemanta anglisy dia fantatra tamin'ny hoe gazela, mpamokatra dite mahafinaritra.
Betsaka ny fivavahana sy ny fiteny eto na dia misy fomban-drazana bodista mahery sy taloha aza. Ny renivohiny dia Colombo ary ny diany mankany amin'ny nosy dia tsy maintsy ahitana ilay sarivongana Avukana roa ambin'ny folo metatra avo, ny Toerana Sigiriya, mijanona eo ambonin'ny vatolampy mijoalajoala sy tsy mety zaka, miaraka amina fresko maro loko izay nambara fa lova manerantany (misy tany fito ao amin'ny firenena) na ny tanànan'i Polonnaruwa fahiny.
Bangladesy repoblika misy mponina 166 tapitrisa mahery. Ny fiteny ofisialy dia ny bengali ary izy no manana delta lehibe indrindra manerantany satria telo amin'ireo renirano lava indrindra any Azia no mivondrona ao: ny Ganges, ny Meghna ary ny Brahmaputra.
ihany koa manana honko lehibe indrindra eto an-tany, velaran-tanin'ny vokatra dite any afovoan'ny ala orana, 600 kilometatra amorontsiraka miaraka amin'ny morontsiraka lava indrindra eto an-tany, nosy ary haran-dranomasina mahafinaritra.
Tsy tsara fanahy tamin'ity firenena ity ny tantara, fa iza amin'ireo mpifanila vodirindrina aminy no nanehoany hatsaram-panahy?
Pakistan ohatra iray hafa amin'ny firenena tsara tarehy sy mahari-po izy io. A repoblika islamika miaraka amin'ny mponina maherin'ny 190 tapitrisa. Ny toerana misy azy dia nahatonga azy ho linchpin teo amin'ny solaitr'izao tontolo izao ary mandoa izany izy.
Tamin'ny tapaky ny taonjato faha-XNUMX dia nahavita ny fahalalahany manokana izy ary nanjary manan-danja fanjakana silamo. Tamin'ny 1971 dia nanomboka ny ady an-trano izay nahaterahan'i Bangladesh. Ny governemanta miaramila nifandimby, ny fitaovam-piadiany atomika, ny ady ho an'ny Kashmir ary ny fifandonana amin'i India dia nanova azy io ho vovoka sarotra vonoina ary tsy lazaina intsony, tsy azo tsidihina.
Bhutan Tsy repoblika io fa fanjakana, a fitondram-panjakan'ny lalàm-panorenana. Tsy misy fivoahana mankany amin'ny ranomasina ary any an-tendrombohitra himalaya io. Ny renivohiny dia ny tanànan'i Timbu ary izy dia iray amin'ireo ny firenena kely indrindra sy be mponina indrindra eto an-tany: Latsaky ny iray tapitrisa!
Nanomboka tonga tao Bhutan ny mpizahatany tamin'ny taona 70 ary androany dia maneho fidiram-bola lehibe amin'ny toekarem-pirenena izy ireo, na dia tsy amporisihina aza ny fizahan-tany faobe, fa ny fizahantany maharitra.
Manana izay mahasarika mpitsidika izy: tontolo mahafinaritra, lanonana ara-pivavahana ary monasitera. Eny tokoa, mila manodina ny visa alohan'ny fivezivezena ianao.
Repoblika federaly i Nepal izay tsy misy lalan-kivoahana mankany amin'ny ranomasina koa. Na dia tsy manana sisintany iraisana amin'i Bhutan aza izy io dia misy faritany 24 kilometatra antsoina hoe vozona akoho.
Hatramin'ny taona 2008 dia mpanjaka nanjakan'ny lalàm-panorenana izy io, saingy taorian'ny ady an-trano mahery vaika dia nanomboka vanim-potoana vaovao. Indrisy tamin'ny 2015 dia niharan'ny horohoron-tany nahatsiravina izany, valo arivo mahery ny maty, ka mbola manarina.
Ny jeografia dia ny amin'ny efajoro, be tendrombohitra io ary manana tampon-tampon'ny avo izy ... anisan'izany ny Tendrombohitra Everest. Any Nepal dia misy tendrombohitra mangatsiaka, ala mando, vanim-potoana dimy, satria isaina ny monontaona, ary ny olona miteny amin'ny fiteny samy hafa sy mitonona ho samy hafa fivavahana.
Finalmente, ny Maldives dia nosy sy firenena Silamo ao amin'ny Ranomasimbe Indianina. Ny renivohiny dia Malé ary ny jeografia dia misy nosy 1200 eo ho eo, 200 monja no honenana, fa raha miakatra ny haavon'ny ranomasina dia hanjavona mandrakizay izy ireo.
Nandalo teto ny anglisy, ny portogey ary ny holandey, na dia mahaleo tena aza izy hatramin'ny faramparan'ny taona 60. Tsy ny demokrasia lehibe eto an-tany izy io ary izy no firenena kely mponina indrindra any Azia. Mazava ho azy, manana endrika mahafinaritra sy torapasika mahatalanjona izy ka toerana fitsangantsanganana mahafinaritra indrindra eo amin'ny eropeana. Betsaka ny olona miaina avy amin'ny fizahan-tany sy misy resort maherin'ny zato.
Ity no saikinosy sarotra sy kanto ary manankarena ara-kolontsaina any Hindustan. Firenena iza no ipetrahanao?
Làlana feno mankany amin'ny lahatsoratra: Vaovao momba ny dia » Fitsangatsanganana any Azia » India » Saikinosy Hindustan
Ny distrikan'i Saint Denis mahagaga ao Paris